ज्ञानेन्द्र शाहीले यस्तो प्रश्नको जवाफ दिन नसकेपछि भएको थियो कुटाकुट, के थियो त्यो प्रश्न ? — Sanchar Kendra
ज्ञानेन्द्र शाहीले यस्तो प्रश्नको जवाफ दिन नसकेपछि भएको थियो कुटाकुट, के थियो त्यो प्रश्न ?
काठमाडौँ । भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता बताउने ज्ञानबहादुर शाही (ज्ञानेन्द्र शाही)लाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईमाथि दुर्व्यवहार गरेका शाहीले हिजो भएको घटनाबारे जानकारी दिने भन्दै पुल्चोकमा आज गरेको पत्रकार सम्मेलनमा हात हालाहाल भएपछि उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । शाहीले पत्रकार सम्मेलनमा सोधिएका प्रश्नको जवाफ दिन नसकेपछि युटुबर र शाही समर्थक बीच हात हालाहालको स्थिति बनेको थियो ।